Asalka awooda madow - Documentary (2020) - Afrikhepri Fondation
jimco, february 26, 2021
Thesheeko xasaasi ah oo ka mid ah ururadii ugu qaran dumiska iyo muranka badnaa qarnigii 20aad. Dhiirrigelinta Marxist-Leninist, bakhaarradii madoobaa waxay isu aasaaseen beddel xagjir ah oo ku aaddan dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee uu hoggaamiyo Martin Luther King. Isku darka kaydadka naadir ah iyo markhaatiyaal fara badan, daloolin xoog leh oo lagu tuuro wadnaha “Awoodda Madow”.
Oakland, California, 1966. Sanad kadib rabshadihii Watts ee ka dhacay Los Angeles, laba arday, Huey P. Newton iyo Bobby Seale, ayaa sameeyay is-difaac is-kaashi ah si loola socdo ficilada booliiska ee geetooyinka madow. Markii la noqday, isla sanadkaas, dhaqdhaqaaq xoriyad siyaasadeed oo Afrikaan-Mareykan ah, Xisbiga Black Panther Party (BPP) waa codka beel xun oo ku nool Mareykanka oo ay ku badan yihiin dadka caddaanka ah. Dhiirrigalinta Marxist-Leninist, ururku wuxuu u taagan yahay inuu yahay bedel xagjir ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee uu hoggaamiyo Martin Luther King. Waxaa barbar socda "barnaamijyadeeda badbaadada" (quraacda bilaashka ah ee carruurta, makhaayadaha, iwm), waxay sheegataa inay xiisaynayso kacdoonka. Halku dhigyo, afro gooyey, feedh kor loo qaaday: Black Panthers ayaa furaya halgan cusub oo loogu talagalay bulshada madow. FBI-da, oo ka baqday jawiga dhaqdhaqaaqa, oo ay kujiraan dhalinyarada cadaanka ah, ayaa xoojinaya sirdoonka. Xarigga Huey P. Newton, oo ku lug lahaa dilkii sarkaal bilays ah, ayaa xasillooni darro geliyay ururka. Sannadkii 1968, falcelintii dilkii Martin Luther King, afhayeenkiisii ​​Eldridge Cleaver ayaa diiday inuu is dhiibo ka dib markii ay is khilaafeen booliska. Wuxuu u qaxay Algiers wuxuuna halkaas ka abuuray qaybta caalamiga ah ee xisbiga.
"Awood dheeri ah sii dadka"
Laga soo bilaabo markuu ku soo booday qalbiga lixdamaadkii ilaa dhicitaankiisii ​​naxariis darrada ahaa, agaasime Stanley Nelson wuxuu raadraacayaa soo jiidasho iyo taariikh aan caan ahayn oo loo yaqaan 'Black Panthers'. La dagaalanka sarraynta caddaanka iyo hanti-goosadnimada, xubnaheeda waxay ku calaamadiyeen male-awaalka wadajirka ah xagjirnimada dhaqdhaqaaqooda, hadaladooda oo labadaba ah dagaal iyo midayn, laakiin sidoo kale xeerarkooda labbiska iyo qaabkooda kacaanka ee ay ku qabsadaan goobaha dadweynaha. Toddobaatameeyadii iyo dhawaaqa cufan ee cinwaanka "Sii Awood Badan Dadka" Chi-Lites, dokumenterigan wuxuu dib u soo celinayaa quruxda xanaaqsan ee dhaqdhaqaaqa iyada oo aan la qarinaynin ciqaabtiisa iyo dhinacyada mugdiga ah - rabshadaha iyo dagaalka ego - iyadoo la adeegsanayo kaydinta wareysiyo waaweyn oo qoto dheer oo lala yeesho dadka u dhaqdhaqaaqa, wakiilada FBI iyo taariikhyahanno. Wuxuu sidoo kale xasuustaa in bar bilowgiisu uu wali khuseeyo maanta.
Documentary uu qoray Stanley Nelson (Mareykanka, 2020, 54mn)
Beenta caalamiga ah - Pierre Jovanovic
Qoob ka ciyaarka aan dhamaadka lahayn - Documentary (2016)
Naftaada iskaga daa saliidaha lama huraanka ah - Françoise Couic-Marinier
Sirdoonka Geedka (2017)